Welcome kuti unopenya kwemasango zvizere yendarama zvishongo vari Golden Jungle vakasununguka Tunoruka hapana dhipozita Casino.Pano chiratidzo ose achakuyeuchidzai nemakore umambo yemadzimambo Indian. Chinhu chinozivikanwa yokuti vakanga yakakura pefuma yendarama yakaita minondo, headpieces, neemaradhi zvindori, mabhokisi, mifananidzo goridhe pamadziro nezvimwewo. nechekare kufara? Unofanira kuva! Ruzha akafanana nepfuma zviri munzira yako zvakare!
IGT kana International Gaming Zvigadzirwa zvava asi akaratidza zvakare mettle yaro Golden Jungle vakasununguka Tunoruka hapana dhipozita Casino. gore 2006 kwakava kutanga remapazi IGT muna America pasi nezita GTech vesangano. Ichi kambani America anotsanangura achangobva kuwana zita raro 2015 when Gtech Corporation acquired IGT and took on its name for carrying on all its future operations Industry.
mu Golden Jungle vakasununguka Tunoruka hapana dhipozita Casino, ari vachitamba yemakomo pakati 50p ari kuruka kuti £ 1,500 uye aitambisa 5 Gwenzi. Pane 50 paylines kuti vavavarire kuhwina mubatanidzwa. Zviratidzo 'pfuma' anosanganisira chindori mabwe, artefacts, jewellery boxes, uye nzou yakanyungudutswa. The pamusoro bhonasi chiratidzo ndiyo ingwe unotsiva zviratidzo zvose kunze yomusango uye uparadzire. tyisa 2 chiratidzo yakakwirira Tiger kunotungamirira Unobata makuru kana zvichiratidzika pamusoro nechimwe Gwenzi shanu. The kunonyanyisa mubayiro zviri 40 nguva danda rako. zvose, unofanira kuita ndiko kuremara 5 Tigers chimwe nechimwe Gwenzi.
Yendarama gedhi temberi paradzira zviratidzo kunoita pamwe vakasununguka Tunoruka kumativi kwamuri.
Pane 2 chikuru zviri vakasununguka Tunoruka hapana dhipozita Casino mutambo: The Wild dzezvitsigiro, 4 Plays dzinoti vanoda kuti kuunganidza 4 Idol Statue zviratidzo. Kana izvi zvaitika, mumwe Gwenzi kuva rakakiyiwa mhuka vanodzungunyika. Rinomirapo chakadaro 4 zvakawanda Tunoruka. Free Tunoruka bhonasi kuchiitwa kunouya nokusvika kanenge 3-5 Muparadzire zviratidzo. Mune Free Tunoruka bhonasi, uri vapiwa mukana kusarudza uwandu vakasununguka Tunoruka uchada kuti vadzokere nezveimwe nhamba Gwenzi kuti rakakiyiwa Gwenzi yomusango.
3 Anoparadzira: 15 vakasununguka Tunoruka vane vanodzungunyika 3 Kuva rakakiyiwa
6 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 2 uye 4 yakapfigwa
2 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 1, 3 uye 5 yakapfigwa
4 Anoparadzira: 30 vakasununguka Tunoruka vane vanodzungunyika 3 Kuva rakakiyiwa
12 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 2 uye 4 yakapfigwa
4 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 1, 3 uye 5 yakapfigwa
5 Anoparadzira: 75 vakasununguka Tunoruka vane vanodzungunyika 3 Kuva rakakiyiwa
30 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 2 uye 4 yakapfigwa
12 vakasununguka Tunoruka vane Gwenzi 1, 3 uye 5 yakapfigwa
Kuva pasi kuti nzira kutsaura mutambo, ari vakasununguka Tunoruka hapana dhipozita Casino ari kunyanya Zvinosarudzwa pangozi-averse vatambi vanongoda kuti laze famba aine playing slots uye vane nguva nyore.